यस पटकको विश्वकप कसले जित्छ ? के भन्छन नेपाली कलाकार ? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३०, २०७५११:०४0
काठमाडौँ, ३० जेठ । यतिबेला देशभर विश्वकपको माहोलले तातेको छ । रसियामा आयोजना हुने फिफा वल्डकप २०१८ ले नेपाली खेलप्रेमी अहिले उत्साहित छन् । फिफा वरियतामा कमजोर राष्ट्र भएपनि नेपालमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी रुचाइने खेल हो, फुटबल । त्यसैले त गाउँ शहर अहिले जताततै फुटबलको चर्चा चलिरहेको छ यसकै सन्दर्भमा कलाकारहरुको रोजाइमा रहेको विश्कप टिमको चर्चा गर्दैछौँ ।
अभिनेता गौरव पहारी भन्छन् अर्जेन्टिनाले जित्ने आशा निकै आशा छ हेरौँ अब के हुन्छ । फुटबल हेर्ने, खेल्ने दुबै गर्छु । मेरो फेभरेट फुटबल क्लबचाहिँ रियल म्याड्रिड हो । रियलको खेल मनपर्छ । सबै खेलाडीहरु ठिक लाग्छन् । क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करिम बेन्जमा, सर्जियो रामोस सबै मनपर्छ । वल्र्डकपमा अर्जेन्टिनाको पक्षमा हुन्छु । सन् २०१४ मा अर्जेन्टिनाले राम्रो खेल्दाखेल्दै पनि लास्टमा जर्मनीसँग हारिहाल्यो । साह्रै चित्त दुखेको थियो । यसपालि जित्छ भन्ने आस छ । म स्कुल हुँदादेखि नै फुटबल खेल्थेँ। अचेल फुटसलतिर लागेको छु ।
अर्का कलाकार प्रशान्त ताम्राकार भन्छन्, ‘अर्जेन्टिना प्यारो लाग्छ ।
अर्जेन्टिनाले जित्यो भने गजब हुनेवाला छ । फुटबलकै विषय समेटिएको ‘क्याप्टेन’ फिल्ममा म प्रशिक्षकको भूमिकामा छु, सुटिङ चलिरहेको छ । यस कारण पनि यो विश्वकप मेरा लागि अर्थपूर्ण छ ।’अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का भन्छिन्, ‘खासै थाहा छैन्, म सानोमा ब्राजिलको फ्यान थिएँ । किन थिए चाहि थाहा छैन । पछि स्पोर्ट्समा रुचि हुन छोड्यो । वल्र्डकप हेर्न छाडेको धेरै भइसक्यो । पछिल्लो सिजन पनि हेरिनँ । घरमा दाजुभाइले हेर्थे, मलाई वास्तै हुँदैनथ्यो । म कुनै टिम, फुटबल क्लब वा खेलाडी चिन्दिन । यसपालिको वडकपबारे मलाई केही थाहा छैन । तर, म्याच सुरु भएपछि जबर्जस्ती अपडेटेड भइन्छ, जताततै यसकै कुरा हुन्छ नि ।’
गायक मिङ्मा शेर्पा भन्छिन्, ‘मलाई गेममा जालझेल गरेको मन पर्दैन दिनदिनै नहेरे पनि विश्वकपको फाइनल खेल छुटाउँदिन । अर्जेन्टिना पहिलेदेखि नै मनपथ्र्यो । उनीहरू अनुशासित भएर खेल्छन् ।फेयर खेल्ने र गेममा मिहिनेत देखाउने खेलाडी राम्रो लाग्छ । अघिल्लो वल्डकपको फाइनल मैले वसन्तपुरमा हेरेको थिए । ठूलो क्रिनमा धेरै मान्छेसँग हेर्दा मज्जा आउँछ ।’फिल्म निर्देशक असिम शाहलाई भने इंग्ल्यान्डको पक्षमा छन् ।
फुटबलको यो महोत्सव हेरिएन भने समाजले स्विकार्दैन होला । म अर्जेन्टिना र ब्राजिलको समर्थन गर्दै हुर्केको हुँ । दुवै फाइनल पुगे भनेचाहिँ अर्जेन्टिना रोज्छु । सानैदेखिको फेभरेट भएको र कुनै बेला अर्जेन्टिनाकै जर्सी लाएर मैदानमा उत्रिएकाले पनि मलाई यो टिमप्रति विशेष लगाव छ । अर्जेन्टिनाले जित्छ भनेर कतिचोटि बाजी थापेको अनुभव छ । तर, यसपालि इंग्ल्यान्डको सर्पोट गर्दै छु । फुटबल क्लबमध्ये मलाई म्यानचेस्टर युनाइटेड मनपर्छ ।
अभिनेत्री स्यारोन श्रेष्ठलाई फुटबलको ज्ञान शून्य छ । ‘फुटबल खेलाडीमध्ये मैले चिन्ने भनेको लियोनल मेसी, पाल पोग्बा र क्रिस्टियानो रोनाल्डो मात्रै हुन् । यिनीहरू जता छन्, त्यही टिमको सपोर्ट गर्छु । स्पोर्ट्स च्यानल कहिल्यै हेर्ने गरेको छैन । फिफा वल्डकप आउन लागेको भन्ने सुनेको छु । तर कहिले हो, के हो थाहा छैन । म्याचको बेला चाहिँ अरूले गफ गरेको सुनेरै धेरथोर थाहा पाइन्छ । म स्पोटर्सपर्सन होइन, यसमा पटक्कै रुचि छैन  ।
विश्वकपको फोटो सुटमा किन सिरियस देखिए मेस्सी ?